Ii-corydoras, ukucoca iintlanzi zangaphantsi kwe-aquarium | Ngeentlanzi
Ngaba uyayazi intlanzi Corydoras? Kuwo nawuphina umntu othanda ukuzonwabisa oqala nge-aquarium yakhe yokuqala, kubaluleke kakhulu ukuba azazi ezinye zezinto eziphambili ekufuneka ezazise kuyo ezalisekisa imisebenzi efana nokucoca imali okanye ukucoca iglasi.
Uhlobo olunoxanduva lokucoca ezantsi kwe-aquarium kwaye siza kuthetha ngayo namhlanje yile eCorydora. Igama Corydoras ivela kwisiGrike ikholo ('umnqwazi') kunye iidoras ('ulusu'). Oku kugwetyelwa kukunqongophala kwezikali kunye nobukho bamathambo angamathambo emzimbeni. Ezi ntlobo zihlala zifumaneka ngengcebiso yomrhwebi okuthengisela i-aquarium kwaye akuxelele ukuba kukho iintlanzi eziphetheyo Ukucoca iibhloko ze-aquarium kunye nokucoca iglasi. Ngaba ufuna ukwazi yonke into malunga nale ntlanzi?
1 Ucalulo kunye nolwabiwo lwejografi
2 Intlanzi imvelaphi ecocekileyo
3 Ukuziqhelanisa kunye netyuwa
5 Izinto ngokubanzi
Ucalulo kunye nolwabiwo lwejografi
Ngaphakathi kusapho UCallichthydae Iintsapho ezimbini zihlala kunye: ICallichthyinae y ICoridoradinae. Ngaphakathi kubo kukho iintlobo ezininzi, ezaziwa kakhulu zezi: I-Aspidoras, iBrochis, iCallichthys, iCorydoras, iDianema kunye neHoplosternum.
Ii-corydoras nazo, nazo, ngaphezulu kwe-115 yeendidi ezihleliweyo kunye nezinye ezingama-30 ezingachazwanga. Ezi ntlobo zezendawo zaseMzantsi Melika kunye neendawo zeNeotropical. Banwenwela ukusuka eLa Plata (eArgentina) ukuya emantla eVenezuela kumazantsi oMlambo iOrinoco.
Kukho iintlobo ze-corydoras eziye zaphuhlisa amandla amakhulu okuziqhelanisa neemeko, zombini ezibandayo kwaye zishushu, kwaye zigubungela phantse zonke i-latitude zaseMelika eseMelika. Umzekelo, i corydora aeneus isasazwa phantse kuzo zonke iindawo ezikuMzantsi Melika.
Ngokubanzi bahlala emanzini acocekileyo, kunye nokucothayo okucothayo kwaye ngokukhethekileyo kumazantsi esanti, apho umsebenzi wabo wokukhangela ukutya uququzelelwa. Ngokumalunga noluhlu lwamaqondo obushushu abanyamezelayo, banzi. Ezinye iintlobo zinokumelana ne-16 ° C ezinye ukuya kwi-28 ° C.
Intlanzi imvelaphi ecocekileyo
Xa uthenga iintlanzi ezicocekileyo ezantsi, sicinga ukuba singakulibala ukucoca itanki lethu leentlanzi. Yimpazamo yokuqala leyo. Intlanzi yokucoca ezantsi ayicoceki njengoko kufanelekile, kuba iyaphela ukukhuphisana nezinye iintlanzi ngezikali ezidadayo ngaphezulu.
Into elungileyo malunga neentlanzi kukuba lonke ixesha abalichitha apho baxhokonxa iitshini zabo kumgangatho we-aquarium befuna ukutya. Oku kunceda ekucoceni ezantsi, kodwa esi silwanyana ayizondli 'ngenkunkuma' yezinye iintlanzi engenguye nomqokeleli wenkunkuma. Ngokulula, inyani yokukhangela ukutya iyenza icoceke ezantsi emanzini kwaye igcine izinzile ngakumbi.
Ukuziqhelanisa kunye netyuwa
Uninzi lwee-corydoras zibonisa iimpawu zokuzivelela kwazo kunye nokuziqhelanisa nendawo abahlala kuyo. Iindlela ezikunceda uphile. Umzekelo, iintlobo ezihlala kumazantsi esanti zinommandla wazo ongasemva kunye neepateni ezenziwe ngamabala eentlobo ezahlukeneyo. Oku kwenza, kubonwe ngaphezulu, Banokudideka ngemvelaphi kwaye baphephe ukubanjwa ngamarhamncwa. Abo bahlala kwiibhedi ezimnyama okanye ezinesilivere banomdaka omnyama okanye umnyama ngesizathu esifanayo. Umahluko weChromatic ngaphakathi kwakho nawo ngenxa yokuziqhelanisa nokusingqongileyo.
Ngokumalunga nohlobo lwamanzi olukhethiweyo yi-corydora, sifumana iswiti kunye netyuwa kancinci. Kuqhelekile ukufumana ii-corydoras emanzini amatsha njengamachweba. Nangona kwiindawo ezininzi kuthiwa i-corydoras ayiyikunyamezela ityuwa, akusoloko kuyinyani oko. Zizinto ezithile kuphela ezivela emanzini ashushu eAmazon angakhululekiyo xa kukho ityuwa emanzini. Nangona kunjalo, le tyuwa ayisosizathu sokubangela ukuba iintlanzi zisweleke, kude lee kuyo.
Ukusetyenziswa kwiibhotile, ii-corydoras zizidadi ezihlwempuzekileyo. Uhlobo lwazo lwasemzimbeni luphendula kumkhwa eziwuqhelileyo: ukuhamba ezantsi emilanjeni zikhangela ukutya nendawo yokuzifihla kumarhamncwa.
Ngokubhekisele kwi-morphology, banesisu esisicaba, umzimba oxineneyo kunye nentloko, kunye namehlo kwindawo ephezulu okanye engaphantsi. Imilebe ilungiswe ngohlobo lokuba kunye namaqhina ungavuthulula amazantsi emilambo okanye, kule meko, i-aquarium, ikhangela ukutya.
Umda omncinci onokuboniswa lolu hlobo kukuba xa unezinye zazo kwi-aquarium enye, ngenxa yentshukumo eqhubekayo evelisa ezantsi xa ifuna ukutya, inokubangela inqanaba elithile lokungazinzi emanzini e-aquarium. Ukuthintela olu hlobo lweemeko, ukuba sine-corydora enye, kufuneka sibe nefilitha yomatshini.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba umkhwa we-corydora uluncedo olukhulu, kuba ngokushukumisa umphezulu wecebo lokucoca ulwelo, baya kugcina ezantsi enomoya kwaye ikhululekile ngamasuntswana athintela ukujikeleza kwamanzi kwisihluzo sebhayoloji.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, le ntlanzi icocekile ezantsi, kodwa ayisiyiyo indoda ehambisa ukutya okanye inkunkuma kwaphela. Batya ukutya okuwela ezantsi, okoko kungagqithisanga, kwaye ngenxa yeso sizathu kufezekisa umsebenzi wokucoca ezantsi. Kodwa oku akuthethi ukuba batya inkunkuma yabanye, nangona banokuhlala phakathi kwabo ngaphandle kokunxila njengoko kuya kwenzeka kwezinye iintlanzi. I-Corydoras inokuhlala kwindawo eyonakalisayo ngenxa yenkqubo yabo yokuphefumla eyahlukileyo. Oku kuvumela ukuba bathathe umoya ngomlomo, bagqithise emathunjini kwaye bakhuphe inkunkuma ephefumlelwe nge-anus. Ngale ndlela abayinxili.
Nangona uza kubabona emazantsi e-aquarium ixesha elininzi, banokubonakala beguqulwe ngaphezulu, bekhuphisana nezinye iintlanzi xa kunikezelwa ukutya. Xa ukutya kufakwa kwindawo yokutya edadayo, ii-corydoras zithatha eli candelo kwaye, kwindawo eguqulweyo, kunzima ukususa nentlanzi yesiqhelo enobundlobongela okanye enkulu.
Ngoku makhe sithethe ngokuvela corydoras kunye neempawu zazo. I-Corydoras izisa ubuhle obuthile kwi-aquarium. Imibala yezi ntlanzi ayinakuthelekiswa nenye yezinye iintlobo okanye ubuchule bazo bokudada. Nangona kunjalo, ukuba sibabonelela nge-aquarium apho iimeko zibalungeleyo (banamanzi acocekileyo, i-pH engathathi hlangothi, ukuphakama okuphantsi kunye neendawo zokufihla ezilungileyo) sinokubona oko I-corydoras yintlanzi entle kakhulu. Ukongeza, banamasiko abenza ukuba bathambe ngakumbi kwaye bahlekise.
Ukugcina ii-corydoras zikwimeko entle, kufuneka wongeze iintlobo ezihambelana nazo. Ezi ntlanzi zinzima kwaye zomelele. Ubume bomzimba wayo ubalulekile ngamacwecwe amathambo anzima kakhulu ukubanika ukhuseleko olufanelekileyo kunye nokuxhathisa, leyo incediswa yimitha ejikelezayo yamaphiko ayo omqolo kunye neepectoral, ezinzima kakhulu kwaye zibukhali.
Enkosi ngenkqubo yokuphefumla esele siyibonile, ezi ntlanzi zinokuxhathisa kakhulu kwizifo. Nangona kunjalo, banokugula njengayo nayiphi na enye intlanzi ukuba kuhlangatyezwane nale miqathango ilandelayo:
Xa intlanzi ithuthwa ngobuninzi ukusuka kumaziko abalobi ukuya kwiindawo zokugcina impahla. Xa oku kusenzeka, amaphiko azo angonakala. Ukuzinyanga, kungcono ukuzifaka kwitanki leentlanzi ngexabiso elincinci, amanzi acocekileyo kunye nonyango lwe-antiseptic. Ngale ndlela bayakuphepha izifo.
Xa bevezwa kukungcoliseka kwendalo. Xa kukho inkunkuma eninzi ephilayo evelisa ii-nitrites ezininzi, zihlala zinengxaki yeebhaktiriya. Isisombululo koku kukuphepha ukuba namanzi amdaka kwaye sihlaziye rhoqo.
I-Corydoras inemfuno ephezulu kakhulu yokuzala kwayo. Umzekelo, i-corydoras paleatus bane-albino mutation ekhuliswe ekuthinjweni iminyaka emininzi.
Olu hlobo luya kwanela ngamanzi acocekileyo, i-pH engathathi hlangothi kunye namaqondo obushushu angama-25-27 ° C. Ngale nto, phakathi kwamadoda amathathu ukuya kwamathandathu kunye nemazi enye okanye ezimbini ziya kuba nakho ukuvelisa ukuzala ngexesha elifanelekileyo.
Kulutsha kufuneka ube ne-aquarium ekhethekileyo, kunye nobukhulu be-120 × 45 cm kunye nokuphakama kwama-25 cm. ngaphandle kwesihluzo esingasemva.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukufunda ngakumbi ngecorydoras xa ubazifumana kwaye unazo kwi-aquarium yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Corydoras